Pyonepan Way: Firefox ကို မြန်အောင်လုပ်မယ်….
Firefox ကို မြန်အောင်လုပ်မယ်….
ကျွန်တော်တို့ Internet အသုံးပြုသူ အများစုကတော့Mozila FireFox ဆိုတဲ့ Browsing Program ကို တော်တော်များများ သုံးစွဲကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်…အင်တာနက်ဆိုင်တွေက ကွန်ပျူတာ (Defreezee အုပ်ထားသောစက်) ဆိုရင်တော့သိပ်အကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့် အိမ်သုံးကွန်ပျူတာတွေ အထူးသဖြင့် Defreezee မခံထားသော စက်များတွက် နေ့စဉ်ရက်ဆက် အသုံးပြုလာတာများလာတာနှင့်အမျှ ဘယ်လို Error တွေကြုံတွေ့ရသလည်းဆိုတော့ Tab အသစ် ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေ၊ Tab တွေအများကြီး ဖွင့်ထားတဲ့အခါမျိုးတွေ၊ Flash Siteတွေကို ၀င်ကြည့်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ Loading အကြာကြီးဖြစ်နေတာ ကိုပဲကြုံကြတဲ့သူတွေများမှာပါ၊ ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာဘာဖြစ်တာလည်းဆိုတော့ အဓိက အားဖြင့် Cache တွေနဲ့Cookies တွေ တအားများလာလို့ Browsing & Performance ကျသွားတာပါ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီပြာသနက်ကို ဖြေရှင်းဖို့ကတော့ နံပတ် (၁) အချက်Browser ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပီးသွားရင် ကီးဘုတ်ကနေ Ctrl +H ဆိုပီးနှိပ်လိုက်ပါ။
အထက်ပါပုံအတိုင်းမှ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ အင်တာနက်ကိုသင် သွားခဲ့သမျှ နေရာတွေ၊ လိပ်စာတွေ အားလုံးကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ကျွန်တော်တို့က အဲဒီနေရာမှာပဲ… TODAY ဆိုတာကို Right Click နှိပ်လိုက်ပါမယ်။
ပီးသွားရင်တော့ Delete ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီနည်းကတော့သင့် Browser ထဲမှာရှိတဲ့ Cache တွေကို ရှင်းပြစ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ မလိုအပ်တဲ့ အသုံးမများတဲ့ Add-On တွေကိုဖြစ်နိုင်သမျှ Disabled လုပ်ထားပါ သွားရမယ့်နေရာက ထုံးစံအတိုင်း Firefox ထဲ ကနေပဲ
Add-Ons ဆိုတာက နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့
အထက်ပါပုံအတိုင်းမှ မလိုဘူးထင်တာတွေကို Disabled လုပ်ထားပေးပါမယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ သင့်ကွန်ပျူတာအတွင်းမှာCC Cleaner ရှိတယ်ဆိုရင် CC Cleaner နဲ့လည်း Cache တွေ Cookies တွေကိုရှင်းပြစ်လို့ရပါတယ်။ဒီနည်းဟာလည်း အလျှင်မြန်ဆုံးနဲ့ ထိရောက်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း တစ်ခါတစ်လေ မှာ မိမိရဲ့Browser တွေကိုတော့ Reset လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ Browserကို Reset ချဖို့အတွက် Mozila FireFox ရဲ့ဘယ်ဘက်ထောင့်နားကနေ
အထက်ပါပုံအတိုင်း Firefox ထဲမှ Help ကိုဝင်ပါ၊ ပီးသွားရင်တော့ Troubleshooting Information ဆိုတဲ့ ထဲကို ၀င်လိုက်ပါ၊ ဒါဆိုရင်တော့အောက်ပါပုံအတိုင်း
Reset Firefox ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့
အထက်ပါပုံအတိုင်း Message Box တစ်ခုကျလာပါမယ်။ ဒီနေရာမှာတစ်ခုသတိပေးချင်တာက ကျွန်တော်တို့လို သာမာန် End User တွေအတွက်တော့ ကိစ္စမရှိပေမယ့် အချို့ အချို့ သော ဟက်ကာဂျီးတွေကတော့ စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ Hacking အတွက် လိုအပ်တဲ့ Plug-In တွေ၊ Add-On တွေ၊အကုန်လုံး ပျက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Browser တွေအတွက် မှတ်ထားတဲ့ Password တွေပါ ဘာမှ မကျန် အားလုံး Software အသစ်ပြန်သွင်းထားသလို ဖြစ်သွား ပါလိမ့် မယ်။ကဲ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒီ Post လေးဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် Idea ရအောင် ကူညီပေးသော ကျွန်တော့်အန်တီလေး Elizabeth Desai အားလည်း ဂုဏ်ပြုလျှက်
Posted by Pyonepan Way at 4:37 AM